Ukwehla okukhulu kwemali ngesikhathi senhlekelele ye-corona kuholela ekuphikiseni: ingabe i-bitcoin isisombululo? : UMartin Vrijland
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ku-13 May 2020	• 21 Amazwana
"Imali yeFiat" noma i- "fiduciary imali" yimali ethola inani layo hhayi kusukela kulokho okwenziwe ngalo (okufana nezinhlamvu zemali zegolide nezesiliva), kodwa ngokuqiniseka ukuthi ingasetshenziswa ukuthenga izimpahla nezinsizakalo. Inani ngakho-ke alisuselwa kwisisindo esithile nokuqukethwe kwensimbi eyigugu, kodwa kwithemba lokuthi opharetha bezomnotho abalibeka ngenani lemali.
Lapho wawunakho izinhlamvu zemali zegolide noma zesiliva kudala, lelo nani laxhunyaniswa ngokuthi ingashesha kangakanani futhi igolide noma isiliva. Ngokwazisa imali yamaphepha, umshini wokuphrinta ungavulwa. Ngemanani 'ekhompyutheni', isilinganiso seDola le-OPEC kanye nesixhumanisi sokukhiqizwa kawoyela bekufanele kunikeze usizo. Zonke lezo zindinganiso zaphonswa ngaphezulu ngesikhathi senhlekelele ye-corona.
Amabhange amaphakathi aphrinta imali engenamkhawulo. Benza lokhu ngoba isidingo semali siyakhula. Yini enye ongayenza, njengohulumeni, ukunikela ngawo wonke lawo mapakethe wosizo lapho ufaka khona abantu inani ukuze usinde?
Kungani ukumbozwa kwemali kubaluleke kakhulu?
Ngenkathi usenemali esiliva negolide, isidingo salowo mali sakhula njengoba inani labantu landa njengoba ukuhweba kukhula. Lokho kusho ukuthi kufanele ube nezinhlamvu zemali eziningi ukuze uhlanganyele. Ngithenga umkhiqizo wakho bese ukukunikeza inamba yezinhlamvu zegolide zenani elithile. Ungathenga okudingayo kulezo zinhlamvu zegolide.
Ngoba ubusazi ngaleso sikhathi ukuthi bekuyinqubo ebaluleke kakhulu ukukhipha isiliva noma igolide emhlabathini, ubuwazi futhi ukuthi izongezwa izinhlamvu zemali ezingaphezulu, kodwa ukuthi isidingo semali ethe xaxa akusho ukuthi lelohlamvu lwemali lizovela ngokungazelele isonto. yayikhule ngenani. Ngemuva kwakho konke, kwathatha isikhathi nomzamo ukukhipha leyo mhlabathi emhlabathini bese uyincibilika ibe yizinhlamvu zemali. Ngakho-ke ungayigcina ngokuphephile imali yakho okwesikhashana ukuze uthenge okuthile ngesonto elizayo, ngaphandle kokwesaba ukuthi uhlamvu lwemali lwegolide lwalubiza ingxenye yemali.
Lapho lezo zinhlamvu ezisindayo zithathelwa indawo imali yamaphepha, kwaba lula kakhulu. Iphepha kulula ukuliphrinta. Ngenxa yalokho, amabhange amaphakathi kuphela kwakufanele avule umshini wokunyathelisa. Lokho kusathathe isikhathi nomzamo, kepha sekuvele kulula. Leli phepha-ke laxhunyaniswa nezimayini zegolide. Lokho kwaba indinganiso yegolide. Isibonelo, ukuphrinta imali kuhlale kuxhunyaniswe nesivinini lapho izimayini zegolide zingakha igolide khona, ngakho-ke uvimbele ukwehla ngokushesha kwenani.
Njengoba isidingo semali sanda njengoba inani labantu emhlabeni kanye nokuhweba kukhula, leli zinga legolide lalishiywe ngasixa esithile. Leyo ndlela yasungulwa i-OPEC. Le nhlangano kawoyela kwakufanele ixhumanise ukukhiqizwa kwemali nokukhiqizwa kawoyela. Ngakho-ke kwenziwa izivumelwano zomhlaba wonke mayelana nenani lemiphongolo yamafutha engase ikhiqizwe amazwe. Idola lalixhunyaniswe nokukhiqizwa kawoyela, ngakho-ke uma ufuna ukuphrinta amadola, ungenza lokho kuphela ngokuya ngenani lamafutha anyuswe.
Leyo nsimbi kawoyela nayo kade yaqala ukukhishwa futhi manje akusekho ukumbozwa. Okwamanje, amabhange aphakathi nendawo adala 'imali ye-fiat'. Lokhu kusho ukuthi azinayo imikhawulo noma yini yokuphrinta imali futhi ngoba akunasiqiniseko sokuthi lokhu kuhlobene nejubane lapho igolide noma uwoyela kungakhishwa khona emhlabathini, ukwehla kwemali akuvinjelwe. Ungathola ukwehla okukhulu kwezezimali kungakapheli isonto elilodwa.
Kusho ukuthini ukuthi imali engaphephile ye-fiat isebenza
Ekusebenzeni, lokhu kusho ukuthi imali iyonakala ngokushesha. Amakhulu ezigidigidi zamaRandi nama-euro ashicilelwe ngesikhathi senhlekelele yeconona. Lokho kusho ukuthi lawo madola nama-euro kumane kungabalulekile. Ngokuhamba kwesikhathi, lokhu kuzothinta amanani asezitolo.
Manje amabhange amaphakathi aqhamuke namaqhinga okufihla ukwehla kwemali. Isibonelo, uma wena njengenkampani yezizwe ngezizwe uboleka imali ebhange elikhulu, lelo bhange elikhulu liboleke leyo mali ebhange eliphakathi. Lawo mabhange aphakathi nendawo abese ephrinta imali ethe xaxa (kahle, empeleni ayinyathelisi, akhulisa isibalo ezinhlelweni zawo zamakhompyutha) ukuze athenge ukubuyiselwa kwezokuphepha ezikweletini (amabhondi, ubufakazi besikweletu) kulawo mazwe.
Ngakho-ke ake sithi inkampani inesikweletu esiyizigidi eziyi-100. Uma i-ECB manje ithenga ukuphepha kwesikweletu kuleyo nkampani, leyo nkampani empeleni ithole izigidi eziyi-100 mahhala. Leyo nkampani ingathenga ukubuyisa amasheya ayo emalini noma ithenge ngaphezulu kwezimbangi eziwayo.
Ngale ndlela uqinisekisa ukuthi abantu abaningi bacabanga ukuthi umnotho usesimweni esihle. Ekusebenzeni, noma kunjalo, ubangele ngokushesha izigidi eziyi-100 ukwehla kwezimali. Manje izigidi eziyikhulu kwezigidigidi zamakhulu ambalwa amaphesenti amancane nje, ngakho-ke uma wenza intaba yezikweletu ibe phezulu ngokwanele, umphumela wokwehla ubonakala uncipha ngamaphesenti. Ngakho-ke, amabhange aphakathi nendawo abonakala ekholelwa ukuthi uma ephakeme enza intaba, incane imiphumela yokuphambuka njengephesenti.
Yilokho esikubona e-US manje, futhi yilokho esikubona naseYurophu. Intaba yesikweletu ikhuphukile kakhulu. Kodwa-ke, bonke ochwepheshe bezezimali emhlabeni wonke bayavuma ukuthi ukwehla kwamandla emali kuyinto enkulu.
Qhathanisa nalokho naleya golide. Leyomali yegolide oyithole ngesonto eledlule lapho uthengisa isikhwama samazambane ibiza cishe impela kuleli sonto, ngoba igolide alikwazi ukumbiwa masinyane. Kodwa-ke, i-euro ese-akhawuntini yakho yasebhange ilahlekelwa inani ngokushesha ngoba imali eningi iphrinta ngokushesha kangangokuba inani lama-plummet ngokushesha okukhulu.
I-Bitcoin njengezinga legolide elisha
Umqambi ongaziwa we-bitcoin uqhamuke nesisombululo esihle kakhulu esisikhumbuza ngegolide lezimayini.
Kufanele sikungabaze kancane ngohlamvu lwemali olunjalo lwe-crypto, ngoba kunikeza ukuthi kungenzeka ukwenza konke ukuthengiselana kutholakale. Futhi iqiniso lokuthi iMicrosoft ngonyaka ka-2019 patent 2020-060606 kufayelwe kuyinkomba yokuthi i-cryptocurrency ingaxhunyaniswa 'kwi-intanethi yezinto'; lapho thina ngokwethu singaba enye yalezo 'zinto'.
Noma kunjalo sesisenkathini yemali yedijithali engalandeleka. Ngemuva kwakho konke, yimali ongayifinyelela ngohlelo lwakho lokusebenza noma ikhadi lasebhange. Ngokuqedwa okuzayo kwemali yamaphepha, ngakho-ke sesivele sikulayini wedijithali ongalandeleka. Inkinga eyengeziwe ngaleyo mali, okwamanje, ukuthi ibuye ilinganise kakhulu ngokushesha okukhulu.
USatoshi Nakamoto isibonakaliso somuntu ongaziwa noma iqembu elenza imali ye-Bitcoin i-Bitcoin futhi lasungula i-blockchain database yokuqala. Singase sizibuze ukuthi ngabe ukuwa kohlelo lwezezimali okukhona njengamanje akuhlelwanga nje ukusishayela sibheke kwi-bitcoin njengezinga elisha. Ngalokho ungahle uzibuze ukuthi uSatoshi Nakamoto akagcini yini eqenjini lamandla elite elifanayo.
Kodwa-ke, uhlelo lwe-bitcoin luklanywe ngobuhlakani kakhulu futhi empeleni lususelwa kunqubo yezimayini zegolide. Ukuze uthengise inani le-bitcoin, ama-bitcoins kumele amaminerali. Lokho akwenzeki ngama-spatulas namafosholo emhlabathini, njengegolide, kepha lokho ngamakhompyutha amaningi asheshayo anentengo ephezulu yokuthenga futhi afaka uphethiloli omningi (amandla). Lokhu kuqinisekisa ukuthi akuwona wonke umuntu ongavele akhiqize ama-bitcoins.
Inqubo yokukhiqiza ama-bitcoins ibizwa nge- 'minerals', empeleni okusikhumbuza ngegolide izimayini ezivela emayini. Le nqubo yezimayini isho ukuthi amakhompyutha kufanele axazulule ifomula yezibalo eyinkimbinkimbi kakhulu kangangokuba kungathatha izinsuku ukuthola isixazululo. Kodwa-ke, ubunzima befomula banda njengoba kunamakhompyutha amaningi kunethiwekhi. Lapho bebaningi abantu abaqala ukumbiwa phansi, kuba nzima ukubala isixazululo.
Njalo lapho ikhompyutha enjalo ixazulule ifomula, kudalwa i-1 bitcoin. Njengokubonga ngalesi sibalo, umgodi uthola ingxenye yalolo bitcoin njengomvuzo.
Ukuqhubekisela phambili umdlalo, inkokhelo inqunywa phakathi nengxenye yeminyaka emine. Ukuthi halving kwenzeke ngengozi kuleli sonto. NgoMeyi 12 kuzoba ngqo. Ngakho-ke uma ukwazile ukwengeza i-12 bitcoin ngaphambi kukaMeyi 1, uthole i-x% yalokho. Ngemuva kukaMeyi 12, lelo nani lisikwa phakathi. Lokhu kusho ukuthi abanye abavukuzi abakwazi ukuthenga "ama-spatulas" amasha "namafosholo" ukwenza umsebenzi wabo wokumba. Ngeke besakwazi ukukhokha izikweletu zikagesi noma sebengasakwazi ukuthenga ama-computer ashesha ukwedlula mina. Bawela.
Uma uyizwa ngaleyo ndlela, ungacabanga masinyane: Lokho kuholela ekwazisweni. Lokho kusho ukuthi izinkampani ezicebile zizophinda futhi zibe ngabavukuzi abakhulu ngakho-ke kungekudala uzoba nephuzu eliphakathi nendawo lapho kwenzeka khona konke lokho izimayini. Indaba nokho, ukuthi ngokulahleka kwamakhompyutha amaningi kunethiwekhi, ifomula yokubala nayo iyancipha ngokulingana. Lokhu kukhuthaza abavukuzi abasha ukuthi bathathe ama-spatulas bese baqala amafosholo.
Noma kunjalo uyivule noma uyivule, uzobona nokukhuphuka kwesilinganiso lapha futhi kukhona nengozi.
Noma kunjalo, abatshalizimali abaningi ngokwengeziwe banentshisekelo kunqubo yokusebenza kwe-bitcoin, ngqo ngenxa yale nqubo yezokumbiwa phansi. Ngemuva kwakho konke, kusikhumbuza ubulukhuni obukhipha ngegolide emhlabathini ngakho-ke kufaniswa nalezo zinhlamvu zemali zegolide zesikhathi esedlule nokuqiniseka okuhambisana nakho 'kokubhuka kokuncipha'. Kungakho ubona ukuthi manje sekunamakhulu ezigidigidi zamarhwebo ngokuhweba nge-bitcoin.
Ngakho iBitcoin inamandla okwenza indinganiso entsha yegolide. Kungasho, njengokuthi, kunganikeza leyo brake ekunciphiseni kwezezimali okuswelekile ngohlelo lwamanje lwe-fiat.
Xhumanisa imali ku-bitcoin
Esimemweni sokubusa ngentando yeningi ngqo izolo eshicilelwe, Ngikhulume ngokuxhumanisa imali ne-bitcoin njenge "standardgolide". Ungasho ukuthi imali kumele ixhumeke kokuthile. Ungaphinde ubuye emuva kwegolide langempela lenyama njengokujwayelekile, kepha-ke kufanele uqhubeke nokumba igolide lisuka emhlabathini futhi lokho akuyona neze imvelo. Amakhompyutha alambele amandla nawo awalungile kangako endaweni ezungezile, kepha sibona ubuchwepheshe obukhulu buvela, obungakhiqiza ugesi ngokwengeziwe emvelweni ngakho-ke ungasho ukuthi lokho okukhethwayo kufanele kube "okujwayelekile kwegolide".
Kuyacaca ukuthi kuzofanela futhi kube nohlobo lwe "golide elijwayelekile "futhi. Ngaphandle kwalokho kuzodingeka sibhekane nokuncipha kwemali ngokweqile. Yilokho kanye okwenzekayo ngesikhathi senkinga yamakhorali. Ukusetha kabusha kweleveli entsha yegolide kufanele kuhambisane nokusetha kabusha kuphiramidi yamandla. Lapho manje imigqa igijimela khona futhi namandla amaningi aya eqenjini elicebile kakhulu, amandla kufanele abe sezandleni zabantu.
Ukubuyisa amandla kubantu bekungaba ngumlando. Lokho akukaze kwenzeke emlandweni. Kodwa-ke ubuchwepheshe obufanayo obusekwe kubo i-bitcoin, okuyi-blockchain, enikeza ithuba lokunika abantu amandla aqondile okwenza izinqumo. Akudingeki uguqule lonke uhlaka lomphakathi, kepha kufanele ushintshe ukuphathwa.
Isibonelo, ungaba nezinkonzo eziholwa ongqongqoshe abakhethwe ngabantu futhi ababika kubantu. Esikhundleni sokufunga ukuthembeka kumqhele, manje bafunga ukuzithoba ebantwini. Lokhu kufanele futhi kusebenza kuyo yonke imisebenzi yezisebenzi zomphakathi nakuzo zonke izifundiswa ezithi manje zifunga ukuthobeka esihlalweni sobukhosi (amajaji, abameli, amaphoyisa, abahloli, abagqugquzeli, njll.).
Vele awukwazi ukubika konke bese ukwethula kubantu, ngakho-ke kufanele kwenziwe isinyathelo sokwenza lula. Umbuzo uthi ngabe izinkumbi zabantu zingagqugquzeleka yini ekuguqukeni okunjalo noma sizophinda yini silinde size siqinisekiswe ngomunye wababizigidigidi abanjengo-Elon Musk noBill Gates, lapho sigijimisa ubungozi bokuthi isixhumanisi ne-blockchain sizohambisana no- ukuxhumanisa ubuchopho bethu kulolo hlelo noma ukuxhumanisa uhlelo olunjalo nesitifiketi sokugoma.
Uma kunethuba lokuqalisa ushintsho, manje selukhona. Akufanele siphonse lelo thuba. Kodwa-ke, ngenxa yalokho sidinga ukuzithuthukisa.
Uma sifuna ushintsho singenza izinto ezimbili. Noma silinda kuze kube yilapho inkinga yemali ye-fiat inkulu kakhulu futhi ukwehla kwamandla emali kufinyelela phezulu kangangokuba i-bulwark efanayo yamandla isinikeza "igolide" elijwayelekile njengesisombululo. Noma siyazikhokhisa thina.
Ngabe silindele ukuthi i-inflation ibe phezulu kakhulu nokuthi sibe sezingeni lokulawula ubuningi bephiramidi lamandla kangangokuba akukho ukubuyela emuva? Ngemuva kwalokho sinesiqinisekiso sokuphathwa kwezobuchwepheshe. Lokho ukusho ukuthi, sizoxhunyaniswa ngazo zonke izindlela nohlelo olusebenzisa ubuchwepheshe ukusenza izigqila zedijithali.
Uma sikhetha ukuthatha izintambo ngokwethu, singabeka amabhuleki futhi sisazuze ohlangothini oluhle lwentuthuko yezobuchwepheshe. Ngemuva kwalokho singabeka amabhuleki ekuthuthukisweni kwamahhala kwe-AI futhi singabeka amabhuleki ekuhlanganiseni kwamandla.
Ngakho-ke, umbuzo uwukuthi ngabe leli thuba elikhona manje lanele yini ukukugqugquzela. Umbuzo uthi ngabe ithuba lokuthi kukhona ukukhanya lanele yini ukugqugquzela amakhulu ezinkulungwane zabantu.
Yilapho i-psychology yesintu iqala ukusebenza khona, kulapho-ke inselelo iza khona ngokushintshwa kwangempela emqondweni wabaningi. Kunoma yikuphi, ngifuna ukwazi ukuzibheka esibukweni ngazi ukuthi ngenze konke okusemandleni ami. Ithuba likhona, amathuba akhona. Kumele nje siwuthathe bese sikwenza. Akudingi ama-pitchforks namabhola. Kuthatha kuphela inguquko kumqondo wakho.
Ngohlelo lokuvota oluqondile oluku-inthanethi, singafaka abaholi abasha ababika kubantu, benze umthetho ucace futhi ube lula, uqede uhlelo lwemali ye-fiat futhi uxhumanise imali entsha ne-bitcoin. Singakuhoxisa njengokuthi akunakungafinyeleleki noma singashaya ukungena sivumele isicelo sakho ukuthi sibe yigciwane. Ingabe ubamba iqhaza?
Ukuhlasela okukhulu kuwebhusayithi uMartin Vrijland, kepha sizoqhubeka!
Amathegi: bitcoin, ubunzima be-corona, dollar, euro, afakiwe, fiat, imali, uhlelo lwemali, standard yegolide, ukukhipha i-halving, nokuhafula phakathi, ukwehla kwamanani, amafutha, ukwehla, I-OPEC, Setha kabusha, i-revolution, Satoshi Nakamoto, isitifiketi sokugoma
13 May 2020 ku-11: 31
Thola lapha ukuthi kungani umgomo wezimayini we-bitcoin uqina uqine:
Benzo Wakker wabhala:
13 May 2020 ku-12: 14
Izikhalazo zisayiniwe, zimbi kakhulu kunabantu abambalwa abenze lokhu.
13 May 2020 ku-13: 46
Kuyavela ukuthi abantu bathanda ukukhononda futhi bathande ukuzwa ukuthi yini okungahambi kahle, kepha abafuni ukwenza umzamo wokusungula ushintsho. Ukuya ezindaweni zokuvota njalo ngemuva kweminyaka emine nokubeka isiphambano kuyajabulisa ngokwanele, ingasaphathwa eyokuthi uzisebenzise ukuze wenze noma yini ngempela - kepha kulokhu, lokho akuyona into engaphezu kokusayina isicelo ukwenza ukunyakaza kuqhubeke.
Ngakho-ke abantu abakholelwa ekushintsheni futhi ngokusobala bakhetha ukukuvumela ukuthi kudlule kubo. Abantu abaningi abathi baphapheme abenzi lutho ngokuzilolonga.
Ukusuka 'esikhwameni sama-chips asesandleni' kuya ku-DWDD, ukuya 'nesikhwama sama-chips ngesandla' sibheke iJensen ukuphela koshintsho olubonakalayo 😉
13 May 2020 ku-14: 17
Yebo, ngingahle ngingaqiniseki noma ngibe neqiniso. Angilindele lutho ezigqilazweni. Ngempela abafuni ushintsho nje lwemali ethe xaxa. Izigqila ziyizigqila ezinhle. Kwakunokuthula kanjani lapho izigqila zingahambanga emgwaqweni ngokwesaba i-'orona '. Ngikukhumbula konke lokho kuphumula manje, kepha akanandaba nokuziphatha nokuthi yini eyiyo. IMadurodam akulona izwe lezinguquko nezinguquko. Yilolo uhlobo lwezigqila kanye nomqondo womthengisi lapha.
Izigqila zisemihle nje, okungenani izinzuzo zokuba yisigqila ukwedlula ububi. Futhi, ungakhohlwa ubugovu kanye nokubola kwezigqila.
Martin, uyiqhawe, uzama konke okusemandleni akho ukudonsa ihhashi elifile ..
13 May 2020 ku-15: 30
Isipiliyoni sami ukuthi kunokuzivocavoca okwengeziwe esikhwameni samazambane.
13 May 2020 ku-15: 40
Amazambane anezimpawu ezinhle ukuthi ahluma ngazo ngokwemvelo. Uma ubeka leso sikhwama samazambane emhlabathini, unenqola yonke egcwele amazambane emavikini ambalwa kamuva. Ngicabanga ukuthi kufanele ube nokuma okuhle ngesikhwama samazambane. Ihhashi elifile liyindaba ehlukile 😉
13 May 2020 ku-15: 54
impela iphuzu lami, ukuhlonipha akukho lutho olungalungile nge…
13 May 2020 ku-16: 12
Ihhashi elifile ngenye indaba. Uxolo uma ngihlangabezana nokukhulu kakhulu.
13 May 2020 ku-17: 18
Kuyaqondakala ngokuphelele. Siyabonga ukwazisa kwakho ngendlela.
Kumele ngivume ukuthi ngiyakhungatheka ukuthola ukuthi akukho okuhamba kancane esintwini, kodwa-ke ngizoqhubeka ngethemba lokuthi kuzoba nephuzu elihle.
Kuyamangaza kakhulu ukuthi abantu kabazihluphi nokugcwalisa uhlu lwezikhalazo bese becindezela inkinobho. Lokho kuphela imizuzwana engama-30 yokusebenza. Ngabe ukungakholelwa noma ukwesaba kukhulu kakhulu? Ngisho kuzo zonke lezo zinkulungwane zabalandeli ngosuku? Noma kumane kungama-chips nezijabulisa zobhiya nje.
13 May 2020 ku-17: 28
Bambalwa abakuqondayo lokho okushiwo isimo samanje sezinto. Ukubona ukuxhumeka nemiphumela yezenzo ezithile kusadinga i-EQ / IQ ethile futhi angikhulumi nje ngezigqila ezixhunyiwe 'ngesihloko' ngaphambi kwegama.
Ukubukwa kwe-Helikopta ngakho-ke kuyisidingo, ukubeka ama-blinkers akulula. Ngakho-ke angikhulumi ngezimpumputhe zomzimba 😉
13 May 2020 ku-17: 56
Ngicabanga ukuthi abaningi abafuni ukudalula amagama abo nemininingwane yamakheli. Ngokwesaba umqashi wabo, 'umsebenzi', abezokuphepha i-AIVD njll njll ngenhlanhla siphila esimweni sombuso sisekelo. Ukukhwehlela. Amaqhawe kumasokisi. Ngemuva kwakho konke, akufanele kube khona ingozi ezincekwini. Cabanga.
13 May 2020 ku-18: 00
Ngake ngaba “nomngane” wami (umuntu engimaziyo) owayengasebenzi ekhaya iminyaka. It uchwepheshe. Okukhethekile Side: ukuxhumanisa nokuhlunga idatha kusuka kwimininingwane.
Ngesinye isikhathi wakwazi ukubuyela emsebenzini ngemuva kwenkambo yokuqabula.
Ukuchazwa kwephrofayili: owesimame futhi ongenazingane nendlu ayithengisayo.
Lapho ngimbuza ukuthi ngabe kungcono yini - nalo lonke ulwazi analo lokuthi ohulumeni bahlola kanjani abantu - ukuhlala emjondolo onomsila esikhundleni sokuthatha umsebenzi owusizo ngempela ekwakheni uhlelo olukhulu lomfowethu (idatha enkulu ehlaziya), yayiyimpendulo yakhe: “Kuhle ukuthi ngingashintsha kusuka ngaphakathi. Futhi ngicishe ngalahlekelwa yindlu yami. Manje sengingahlala lapha nje ngiqhubeke nokushayela imoto yami ”.
Lolo shintsho olusuka ngaphakathi alukabonakali 😉
Aphi amaqhawe? Zisezindlini zazo futhi zingaqhubeka nokushayela izimoto zazo.
13 May 2020 ku-18: 23
Lesi akusona yini isibonelo esihle somuntu onombono ongaboni futhi ongaboni ukuthi wakhetha imigoqo yetilongo azikhiyele lona ngokwedijithali?
13 May 2020 ku-15: 41
Lapho eJalimane naseFrance i-Kampfgeist isekhona ngandlela thile, iMadurodam imile futhi ingokomfanekiso ngokomfanekiso. Ngegama elithi Resistance umuntu ucabanga ukwehluka ..
13 May 2020 ku-15: 44
Faka imaskhi yakho uma uphuma ngaphandle 😷
13 May 2020 ku-15: 42
Amabhamuza azoqhuma, bese kulandela ukukhululeka
13 May 2020 ku-17: 48
Lokho okushiye emhlabeni okugula emhlabeni okunamandla phezu kwethu kunenkinga enkulu uma ulahla i-smartphone yakho noma uyeka ukusebenzisa leyo nto, balahlekelwa ukulawula kwabo kwe-NWO. Ngaphandle kweselula yakho ye-shit-ass ephaketheni, ngeke besakwazi ukukuqapha ngo-24/7 futhi imali yabo ye-digital bubble isengozini lapho bephoqelela wonke umuntu.
Ngakho-ke yeka leyo ndlela yokuziphatha komlutha we-junkie ku-smartphone yakho
14 May 2020 ku-08: 00
Okwami, akukho foni ezokhishwa ngaphandle
13 May 2020 ku-18: 10
Ingxenye yokuxhaswa kwe-corona isongela ukuthi izobuyiselwa: 'Iphutha elikhulu'
Yebo ngicabanga ukuthi akuyona iphutha elikhulu leli, kodwa kufana ncamashi ne-ajenda ye-jpg yokuqothula yonke isigaba esiphakathi bese siyidlulisela kuhulumeni, ngakho-ke manje sekuba yimitarbeiters.
Kusuka ku-33: 10 uRutte: “Ngikholelwa esimeni esiqinile. Leli lizwe lidinga izwe eliqinile. ” 34: 23 "Silizwe elinobuningi ngokuthula emphakathini."
umsolwa ojwayelekile uStiglitz ukhishwa esitebeleni ukuze achaze izinto ezimbalwa, ngakho-ke ukubeka phambili okuningana. Ubusoshiyali buyisango (lobuchwepheshe) lobuKhomanisi Uye waxwayiswa!
13 May 2020 ku-23: 57
ungaqala kanjani ukunyakaza https://www.youtube.com/watch?v=V74AxCqOTvg&t=81s
14 May 2020 ku-11: 56
Kuhamba ngokushesha okukhulu manje. Isibonelo seMac entsha. Kufaka phakathi okufanele ukwenze, okufanele ukwenze ukuthinta uku-oda (funda wonke umuntu ngezandla zabo kulelo phawu lwe-oda, iphutha), unake ukuhleka nokuthi ukuphi, nokuthi uziphatha kanjani. Ngaphansi kophawu olubonayo nolwamukela konke. Yini futhi iso elilodwa, iso lokufunda i-AI. Impela kufihliwe njenge-wink.
« Isikhathi soshintsho olukhulu kanye nokuguqulwa okukhulu: sayina isicelo
Ingabe kufanele uthathe noma wenqabele umuthi wokugomela i-Covid-19 uma uba yimpoqo? Okufanele ngikwenze? »
Ukuvakasha okuphelele: 2.419.594